VR Rising Tide na Mbipụta na Ahịa | Martech Zone
VR Rising Tide na Mbipụta na Azụmaahịa
Wenezdee, Jenụwarị 3, 2018 Dave Hodgson
Kemgbe mmalite nke ahịa nke oge a, ụdị ghọtara na ịmepụta njikọ na ndị ọrụ njedebe bụ isi maka usoro ịzụ ahịa na-aga nke ọma - imepụta ihe na-akpali mmụọ ma ọ bụ na-enye ahụmịhe na-enwekarị mmetụta na-adịgide adịgide.
Site na ndị na-ere ahịa na-echigharịkwu na ụzọ dijitalụ na nke mkpanaka, ikike ijikọ ndị ọrụ nke njedebe n'ụzọ miri emi belatara. Otú ọ dị, nkwa nke mebere eziokwu (VR) dị ka ahụmahụ miri emi dị nso na nkwụsị nke ndị nkwusa, ndị mgbasa ozi na ndị ahịa. N'ezie, ụfọdụ n'ime ndị egwuregwu kachasị na mbara igwe na-abanye na teknụzụ a tupu ọtụtụ ndị na-azụ ahịa enwee isi VR ha. Ọ bụ ezie na imirikiti ndị America anabatabeghị echiche nke ịgagharị ụwa mebere, ndị mgbasa ozi na-elekwasị anya oge na mbọ iji tinye VR na atụmatụ nnyefe ọdịnaya ha n'ọdịnihu - ọ dịkwa mma maka ndị na-ere ahịa ime otu ihe ahụ.
N'ihi gịnị? Dika ndi nkwusa mgbasa ozi na ndi ahia ahia na acho uzo ozo ka ha bia n’iru ndi ahia ha ma jikoo ha na onodu di omimi, kedu ebe ka mma icho ma nye ha nlebara anya karia ime ka ha di ngbako nke ebe obula? Eziokwu doro anya bụ azịza ya.
Site na ihe omume egwuregwu na ọdịnaya ọdịnaya, teknụzụ VR dị njikere ịgbanwe ụzọ ndị ahịa si enweta mgbasa ozi, ọ bụ ya mere ndị na-ebipụta akwụkwọ na ndị ahịa ji na-awụli elu tupu a nabata ndị mmadụ:
Akụkọ nke e dere ede
Akwụkwọ akụkọ dịka Associated Press na The New York Times na-emepụta ọdịnaya VR nke ejikọtara na akụkọ na-akpali akpali. Anya nke mebere eziokwu na-eme ka ndị na-azụ ahịa rute nso na-eme ka obi ma ọ bụ ihe na-eme ka obi sie ike, na-enye ahụmịhe mgbasa ozi nke na-aga na cinematographic.
Ndị na-ere ahịa n'ahịa nwere ike ịchọpụta otu ha ga-esi bụrụ akụkụ nke akụkọ ndị a, dịka ndị na-akwado ma ọ bụ dịka akụkụ dị omimi nke akụkọ n'onwe ya. Akụkọ mmetụta uche bụ ihe na-eme ka ndị na-ekiri ihe nkiri kachasị elu, na-enye iwu mgbasa ozi mgbasa ozi, okporo ụzọ na nkọwa na-emetụta mmetụta nke nje ma na-eme ka ndị mmadụ laghachi azụ maka ihe ndị ọzọ.
Ingga n'ihu na Ọdịnaya Dijitalụ
na Pasent 84 nke ndị okenye America iji Intanet na Pasent 68 nwere ama, a na-ere ọdịnaya dijitalụ na ọnụego kpụ ọkụ n'ọnụ. Ndị ahịa chọrọ ịnweta ọdịnaya dijitalụ na ndị mbipụta kwesịrị imezu mkpa ndị na-eri were maka afọ ojuju ozugbo. Dika otutu ndi mmadu n’atu anya inweta ihe dijital na mkpisi aka ha, ha gha acho ihe na abia… nke bu ebe VR batara.
VR ewe dijitalụ ọdịnaya nke ozo wee buru ụzọ nabata ya ndi mmadu di omimi onye tolitere na teknụzụ smartphone na mgbasa ozi mmekọrịta. Site na VR, ndị ahịa a nwere ike ịlele ọdịnaya n'ime mmadụ mbụ ahụ, bụrụ akụkụ nke omume ahụ na - n'ọnọdụ ụfọdụ - tinye aka n'ụdị "họrọ ụdị njem gị".
Cheedị ma ọ bụrụ na ị nwere ike "ịbanye" na akụkọ ma họrọ site n'echiche onye na akụkụ ole ị na - ele ọdịnaya ahụ? VR na-eme ka nke a bụrụ eziokwu na ndị mgbasa ozi nwere mmasị na akụkụ a nke VR, na-enyocha otu esi etinye ya na ụlọ ọrụ egwuregwu ọtụtụ ijeri dollar.
A na-akpọ onye na-egwu egwuregwu na-anụ ọkụ n'obi maka ihe kpatara ya - ha bụ ndị na-eguzosi ike n'ihe, ndị nwere mmasị na-ekiri ndị na-ekiri mgbe niile na-ekiri ndị ọkacha mmasị ha na TV na ịntanetị. Gịnị ma ọ bụrụ na ndị a Fans nwere ike ịnweta egwuregwu ahụ n'ọhịa, na-ele ya anya site na quarterback mgbe ị na-ewe iwe, na site na oche dị na 50 ogige mgbe ọ na-agbachitere? Technologysụ ụzọ VR technology na-enye ohere ka ndị ọkpọ nwee egwuregwu n’uzo na-agaghị ekwe omume na igwe onyonyo ọdịnala.
Kama ịnwe egwuregwu ma ọ bụ mmemme mgbasa ozi ọzọ site n'akụkụ ole na ole a kara aka, VR na-emepe ohere maka ndị na-ekiri iji hazie ọdịnaya ha - otu ihe ahụ ga-abụ maka ndị mgbasa ozi. Enwere ike itinye ahụmịhe ụdị n'ime ụwa VR, na-enye ndị na-ekiri ihe ha chọrọ n'ihe ha chọrọ ịhụ n'aka ndị mgbasa ozi. Akpịrị ịkpọ nkụ? Onye na-ere ahịa na oche ahụ na-abịa site n'oge etiti oge, na-enye otu ụdị ihe ọ beụverageụ na ihe ọ servingụ beụ.
VR na-egwuri egwu maka ịchọ ezigbo oge na ọdịnaya miri emi - ihe abụọ ndị amaala dijitalụ nabatara dị ka ụkpụrụ mgbasa ozi taa. Ndụ, ihe omume dị iche iche na-enye ụzọ ụzọ atọ, ahụmịhe nke onye mbụ na VR na-eduga ụgwọ ahụ. Ndị nkwusa na ndị ahịa ahịa savvy nwere ike ịwụli n'ụgbọ mmiri iji gbagoo elu VR, ma ọ bụ nwee ihe egwu nke imikpu na ala nke oke osimiri na-adịghị agwụ agwụ nke ọdịnaya dijitalụ mara mma.
Zeiss VR One Plus maka iPhone 6 Series Zeiss VR One Plus maka iPhone 7 Series
Ngosipụta: Anyị akwụbeghị ụgwọ maka isiokwu ahụ, mana anyị na-ekerịta njikọ Njikọ Amazon Isi ihe VR nke Zeiss na-enye mmeri.
Tags: ọdịnaya dijitalụndi mmadu di omimiọdịnaya dị na miri emiiPhone 6iphone 7Publishingịkọ akụkọvirtual eziokwueziokwu ekweisi ekweisivrekweisi vrvr otuvr otu ekweisizeisszeiss vr otu gbakwunyere
Dave Hodgson bụ onye ntụzi na nkesa na North America maka Ngwaọrụ Multimedia Zeiss, otu n'ime ndị na-azụ ngwaahịa ngwaahịa nke Zeiss, ndị na-eme lens lens, binoculars na scopes. Ngwaọrụ Multimedia gụnyere ekweisi Zeiss VR One na ngwaọrụ ndị nwere ike weara n'ọdịnihu na anya m pụrụ iche.
4 Atụmatụ Dị Mkpa Maka Businesszụ Ahịa Gị Nweta ọtụtụ ebe